SARUDZA MUTAURO Albanian Amharic Arabic Armenian (West) Bislama Cambodian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Chuukese Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Italian Japanese Kikongo Kimbundu Kirghiz Kirundi Kongo Korean Lithuanian Luo Macedonian Malagasy Maya Mixe (North Central) Mizo Moore Myanmar Ndebele Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Palauan Papiamento (Curaçao) Polish Ponapean Portuguese (Brazil) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sepedi Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Venda Vietnamese Wolaita
“Mudzidzi haapfuuri mudzidzisi wake, asi munhu wose anonyatsorayiridzwa achafanana nomudzidzisi wake.”—RUKA 6:40.
KUNE dzimwe nyika vamwe vabereki vanoona sokuti havakwanisi kudzidzisa vana vavo nezvaMwari. Vangafunga kuti dzidzo yavo ishoma zvikuru uye kuti vanongoziva zvinhu zvishoma nezvechitendero zvokuti havakwanisi kudzidzisa vana vavo. Saka vanopedzisira vapa basa iri rinokosha kune mumwe munhu woukama kana kuti mufundisi.
Saka ndiani anonyatsokodzera kuti adzidzise vana chokwadi cheBhaibheri uye nyaya dzokuzvibata? Imboongorora zvinodzidziswa neBhaibheri panyaya iyi wozvienzanisa nezvakawanikwa nevatsvakurudzi.
Basa Rababa Nderei?
Zvinodzidziswa neBhaibheri: “Vanababa, regai kutsamwisa vana venyu, asi muvarere mukurovedza nokurayira kwaShe.”—VaEfeso 6:4, “Bhaibheri Dzvene muChiShona Chanhasi.”
Zvakawanikwa nevatsvakurudzi: Zvinobatsirei kana vanababa vakadzika midzi muchitendero chavo? Nyaya yakabudiswa muna 2009 ine musoro unoti Fathers’ Religious Involvement and Early Childhood Behavior, yakati: “Kana varume vakavawo nechitendero chavanopinda zvingavabatsira kuti vave vanababa vakanaka. Chitendero chinoita kuti vanhu vatsigirane nokudzorana uyewo chine dzidziso nemirayiridzo inobatsira munhu pakurarama.”
Bhaibheri rinoratidza kuti zvinoitwa nababa pakurera nokudzidzisa vana vavo zvinokosha chaizvo. (Zvirevo 4:1; VaKorose 3:21; VaHebheru 12:9) Asi zano iroro richiri kushanda here? Muna 2009, University of Florida yakabudisa nyaya yaitaura kuti kazhinji vana vanongotevedzera zvinoitwa nanababa vavo. Vanotsvakurudza vakaona kuti mhuri dzinenge dziina vanababa vanopedza nguva yakawanda vane vana vavo dzinoita kuti vana vakure vari vanhu vanonzwira vamwe tsitsi uye vasingazvitarisiri pasi. Vakomana havazonyanyi kuita misikanzwa, uye vasikana vanowanzova nepfungwa dzakanaka. Chokwadi, zano reBhaibheri richiri kushanda.
Basa Raamai Rinokosha Zvakadini?
Zvinodzidziswa neBhaibheri: “Usasiya mutemo waamai vako.”—Zvirevo 1:8.
Zvakawanikwa nevatsvakurudzi: Muna 2006, bhuku rinonzi Handbook of Child Psychology rakati munyika dzakawanda vanaamai ndivo vanopedza nguva yakawanda vachikurukura nevana vavo vaduku kupfuura zvinoita vanababa. Tichifunga nezvenguva iyo amai vanopedza vaine mwana wavo, kazhinji mwana anobva atoredzera zvavanoita.
Vabereki pavanoisa misoro pamwe chete vachidzidzisa vana vavo chokwadi nezvaMwari vanenge vachipa vana vavo zvipo zviviri zvinokosha. Chokutanga, vana vanova nomukana wokuva noushamwari naBaba vavo vokudenga. Ushamwari uhwu hunogona kuvabatsira kwoupenyu hwavo hwose. Chechipiri, vana vanodzidza kubva pane zvavanoona zvichiitwa nevabereki vavo kuti murume nomudzimai vanofanira kutsigirana kuti vazadzise zvinangwa zvinokosha muupenyu. (VaKorose 3:18-20) Vamwe vangabatsira havo asi ibasa rababa naamai kudzidzisa vana vavo nezvaMwari uye kuti Mwari anoda kuti zvinhu zvifambiswe sei mumhuri.
Asi, vabereki vanofanira kudzidzisa sei vana vavo? Madzidzisiro api anonyatsoita?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ndiani Anofanira Kudzidzisa Vana nezvaMwari?